Al-shabaab oo weerar ku qaaday Degmada Afgooye | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Al-shabaab oo weerar ku qaaday Degmada Afgooye
Al-shabaab oo weerar ku qaaday Degmada Afgooye
Dagaalamayaal ka tirsan Al-shabaab ayaa xalay waxaa ay weerar xoogan ku qaadeen bar Kontorool oo ciidamada xooga ay ka leeyihiin degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelada hoose Weerarka ayaa waxaa uu ka dhacay xaafada mukeyga oo ka tirsan degmada Afgooye, iyadoona halkaasi fariisamo ay ku leeyihiin ciidamada xoogga dalka.
Dagaalka ayaa waxaa uu socday mudo kooban, waxaana degmada Afgooye laga maqlayay rasaasta ay isweedaarsanayeen dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga oo ku sugan kontoroolka laga soo galo degmadaasi.
Dadka deegaanka ayaa KNN u sheegay in dagaal uu xalay ka dhacay degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelada Hoose. Ilaa iyo hada lama oga khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaalkii u dhexeeyay ciidamada Xoogga iyo Al-Shabaab.
Dhowr jeer oo hore ayaa sidan loo weeraray ciidamada militariga ee ku sugan degmada Afgooye ee Gobalka Shabeelada hoose.
Maqaal horeMadaxweeyne Farmaajo oo saxiixay Sharciga Miisaaniyada 2021
Maqaal XigaSaraakiisha dalka Kenya oo sheegay in si aad ah loo adkeeyay amaanka magaalooyinka waa weyn ee dalkaasi